Ecuador oo beenisay in ay go'aan ka gaartay Assange - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ecuador oo beenisay in ay go'aan ka gaartay Assange
La daabacay onsdag 15 augusti 2012 kl 10.27
Dowlada Ecuador ayaa beenisay war uu soo qoray wargeys the Guardian ee ka soo baxa dalka Britian oo ahaa in ay go'aansatay in ay magan gelyo siiso Julian Assange, aasaasaha warbaahinta Wikileaks oo horay u kashiftay siro badan oo ku saabsanaa dagaalkada mareykanka uu ku qaaday Ciraaq iyo Afghanistan.
Dhinaca kale wasiirka arrimaha dibeda ee dalka Ecuador Ricardo Patiño ayaa sheegay in dowlada dalkiisa aysan keliya ka fekereynin in ay magan gelyo siiso Assange balse ay sidoo kale eegeyso sida Assange uu ugu soo bixi lahaa dalka Ingiriiska si uu u helo magan gelyo.
Patiño oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegay in ay tahay in laga fekero sidii Assange uu ugu soo bixi lahaa dalka Ingiriiska iyo in ay suurageli karto.
Assange ayaa ku dhex jira safaaradda Ecuador ee magaaladda London in muddo ah iyada oo uusan dibeda kaga soo bixi karin waayo booliska Ingiriiska ayaa sheegay in uu jebiyay heshiis damaanad ah sidaasi daraadeedana ay xirayaan haddii uu tallaabo dibada kaga soo baxo safaaradda.
Julian Assagne ayaa safaaradda galay ka dib markii maxkamada sare ee dalka Ingiriiska ay xukuntay in loo soo dhoofin karo Iswiidhan oo ay taalla dacwad ka dhan ah isaga hase yeeshee Assange ayaa ka baqaya in haddii uu yimaado Iswiidhan in ay dhici karto in loo sii dhiibo dalka Mareykanka oo warar hoose ay sheegayaan in ay taallo dacwad qarsoon oo basaasnimo ayna suuragal tahay in uu muto ciqaabta dilka.